iCloud ho an'ny Windows, izay rehetra tokony ho fantatrao | Vaovao IPhone
Ignatius Room | | iCloud
Hatramin'ny nanombohan'ny iCloud, ny serivisy fitehirizam-bokin'ny rahona an'ny Apple dia nivoatra nanampy fiasa vaovao ary amin'izao fotoana izao, aorian'ny fandefasana ny iOS 10, efa azontsika atao ny mandinika Serivisy fitahirizana Apple, serivisy hampiasaina, tsy toy ny niasa taloha, izay zara raha afaka nampiasa azy io ho serivisy hitahiry ireo antontan-taratasy sy rakitra.
Ny fampidirana ICloud amin'ny iOS sy macOS dia feno, mazava ho azy. SAINGY tsy ny rehetra no manana Mac afaka mitantana tsara ny fampahalalana sy ny fahafaha-manao rehetra atolotray antsika amin'ity serivisy Apple ity. Fantatr'i Apple izany ary izany no antony misy azy koa iCloud ho an'ny Windows.
1 Sintomy ny iCloud ho an'ny Windows
2 Amboary ny iCloud ho an'ny Windows
2.1 Inona no atolotry ny iCloud Drive ho antsika?
2.2 Inona no atolotry ny sary antsika?
2.2.2 Ny sariko amin'ny streaming
2.2.3 Sintomy amin'ny solosaiko ireo horonan-tsary sy sary vaovao
2.2.4 Mampidira horonan-tsary sy sary vaovao amin'ny solosaiko
2.2.5 Sary nozaraina tao amin'ny iCloud
2.3 Inona no atolotry ny mailaka, ny fifandraisana, ny kalandrie ary ny asa amintsika?
2.4 Inona no atolotry ny Tsoratadidy ho antsika?
3 Ahoana ny fomba fiasan'ny iCloud ho an'ny Windows
Sintomy ny iCloud ho an'ny Windows
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava isika ny safidy rehetra atolotry ny rindrambaiko iCloud ho an'ny Windows. Raha mampiasa iTunes ianao dia tena azo inoana fa raha manana fitaovana Apple miorina amin'ny iOS ianao dia azo atao kokoa noho ny fikirizan'ny Apple hampidina iCloud fa efa vitantsika izany ary efa napetraka ao amin'ny PC-nay. Raha, etsy ankilany, vaovao isika amin'ity sehatra ity, hanomboka mankafy ny tombony omen'ny iTunes antsika, dia tsy maintsy tsindrio ity rohy manaraka ity ho misintona iCloud ho an'ny Windows.
Raha vantany vao nisintona sy nanatanteraka ny fametrahana isika dia tsy maintsy hamerina ny rafitra fiaretanay mba ho tafiditra ao anaty rafitra ilay rindranasa Apple ary manomboka miasa. iCloud dia hihazakazaka amin'ireo singa izay manomboka rehefa manomboka ny rafitra, ka ny tombony voalohany izay hiseho dia hanontany anay ny mombamomba ny kaonty iCloud anay, izay hampidirantsika ny Apple ID ny tenimiafinao ..
Eo ambanin'ny fampiharana hampiseho amintsika ireo data rehetra azontsika ampifanarahana amin'ny PC-nay miaraka amin'ny Windows, angona izay efa nampiasaina tamin'ny fitaovana iOS na Mac. Noho io rindrambaiko io dia afaka manana data mitovy amin'izany izahay amin'ny rafitra fiasa roa samy hafa, izay mahatonga io fitaovana io ilaina raha tiantsika ny hiditra ny zava-drehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny angon-drakitra, na inona na inona ny rafitra miasa ampiasainay.
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, Apple mamela antsika hampifanaraka ny fisie ataonay amin'ny iCloud Drive; izay rehetra mifandray Photos izay ataontsika amin'ny fitaovan'ny finday (iCloud Photo Library, ny sariko mivezivezy, ny sary zaraina ao amin'ny iCloud ary koa ny ahafahana misintona sy mampakatra horonan-tsary sy sary vaovao na avy amin'ny solosainay); ny mailaka, fifandraisana, tetiandro ary lahasa miaraka amin'ny Outlook sy Safari Bookmarks miaraka amin'ny Internet Explorer.
Fa ankoatr'izay, afaka manao izany koa isika tantano ny fizarana ny fitehirizana ny habaka aminay amin'ny iCloud, mamela antsika hamafa ireo rakitra na kopia voafafa izay mampiasa ny habaka nifanarahanay.
Amboary ny iCloud ho an'ny Windows
Raha vantany vao manoratra ny angon-drakitra ny kaonty iCloud izahay, araka ny efa nanamarihako tetsy ambony, dia omen'ny fampiharana anay ireo safidy rehetra azonay atao mba hahafahana mampifanaraka ny PC. Ireo safidy efatra atolotray antsika dia hiseho voamarika hahafahana manamboatra azy ireo amin'ny dingana manaraka. Raha tsy te hankafy ireo rakitra iCloud, Sary, tsoratadidy na mail, fifandraisana ary ny hafa isika dia mila esorina fotsiny ny takelaka mifanaraka aminy. Raha izany dia, hamela ireo safidy rehetra voamarina izahay afaka manazava amin'ny antsipiriany momba ny inona ireo safidy natolotry ny safidy tsirairay.
Inona no atolotry ny iCloud Drive ho antsika?
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, iCloud izao lasa serivisy fitehirizana mahazatra, na dia mbola misy fetrany ihany aza. Raha misafidy ity takelaka ity isika dia afaka miditra amin'ireo antontan-taratasy rehetra (sokajiana amin'ny lahatahiry) avy amin'ny Windows PC, toa ny azontsika atao amin'ny Mac-nay ankehitriny.
Inona no atolotry ny sary antsika?
Ny fampiatoana an'io safidy io dia ahafahantsika miditra amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra an'ny fitaovana rehetra izay mifandraika amin'ilay Apple ID iray ihany.
Ny sariko amin'ny streaming
Misaotra ireo sariko tamin'ny streaming, afaka miditra amin'ny sary farany nalain'ny fitaovana rehetra mifandraika amin'ny kaonty iray ihany izahay.
Sintomy amin'ny solosaiko ireo horonan-tsary sy sary vaovao
Ity safidy ity dia ahafahantsika misintona ho azy, isaky ny mandrehitra ny solosaina isika, dia ny sary sy horonan-tsary vao haingana indrindra avy amin'ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'ny Apple ID.
Mampidira horonan-tsary sy sary vaovao amin'ny solosaiko
Amin'ity fiasa ity dia azontsika atao ny mampakatra amin'ny kaontintsika iCloud ny sary sy horonan-tsary rehetra izay tahirizinay ao amin'ny lahatahiry Sary \_ Sary ao amin'ny iCloud \_ Uploads, lahatahiry izay soa ihany fa afaka manova ilay iray izay mety amintsika indrindra.
Sary nozaraina tao amin'ny iCloud
Azontsika atao ihany koa ny miditra amin'ireo sary rehetra nozarainay tamin'ny olona hafa avy amin'ny Windows PC. Amin'ireo safidy telo farany, azontsika atao ny manova ny lahatahiry fampidinana na fampidinana ho iray izay mifanaraka indrindra amin'ny fomba fiasa amin'ny rakitra.
Inona no atolotry ny mailaka, ny fifandraisana, ny kalandrie ary ny asa amintsika?
Misaotra an'i Outlook sy iCloud, afaka mankafy ny fifandraisana rehetra, kalandrie, asa ary mailaka mivantana amin'ny Windows PC izahay, ka raha manampy na mamafa ny fifandraisana ao amin'ny Outlook for Windows izahay hampiana na esorina avy hatrany amin'ny finday. Toy izany koa ny mailaka, kalandrie ary asa.
Inona no atolotry ny Tsoratadidy ho antsika?
Ny browser Apple Safari, ao amin'ny kinova ho an'ny Windows, no iray amin'ireo mpitety tranonkala ratsy indrindra azontsika ampiasaina. Toa fantatr'i Apple izany sy amin'ny alàlan'ny iCloud ny browser Internet Explorer ihany no azonay ampifanarahana amin'ny tsoratadidy.
Raha vantany vao nifidy ny safidy rehetra tianay hampifanarahana izahay dia kitiho ny Ampiharo. Voalohany indrindra, haseho antsika ny varavarankely izay hampahafantariny antsika fa hiroso izy io mampifangaro tsoratadidy iCloud miaraka amin'ireo izay ao amin'ny Internet Explorer amin'izao fotoana izao. Tsindrio ny Merge, satria ny safidy hafa dia Delete.
Ankehitriny dia anjaran'ny Mail, ny fifandraisana, ny kalandrie ary ny lahasa. iCloud ho an'ny Windows hanomboka hisintona ny fifandraisana, ny kalandrie, ny asa ary ny mailaka rehetra amin'ireo kaonty ireo hampiditra azy ireo ho Outlook. Rehefa vita ny fizotrany dia hiseho ny varavarankely fanamafisana izay tsy maintsy tsindrio OK.
Ahoana ny fomba fiasan'ny iCloud ho an'ny Windows
Raha vantany vao vita ny fizotrany dia mila mandeha fotsiny amin'ireo safidy rehetra natrehintsika isika mba hahitana raha nahavita azy tsara. Raha te hiditra amin'ireo rakitra voatahiry ao amin'ny iCloud ary koa ny sary rehetra izay niraikitra na hanao izany amin'ny ho avy, toy ny antontan-taratasy ao amin'ny iCloud Drive, mila fotsiny isika Mandeha amin'ny Quick Accesses izahay izay misy lahatahiry vaovao antsoina hoe iCloud Drive sy Photos ao amin'ny iCloud.
Ho an'i Check data miaraka amin'i Outlook Tokony hosokafantsika ny rindranasa ary hizaha ny tsanganana ankavia hanamarina, tsirairay, ny fomba nampifanarahana ny fifandraisana (misy ao anatin'ny vondrona Contact iCloud), ny kalandrie (izay haseho amin'ny isa mitovy amin'ny finday ihany. ), ary koa ireo asa rehetra nifanarahanay tamin'ny iCloud.
Raha te hijery ireo ankafizin'ny Safari izay nifanaraka tamin'ny Internet Explorer dia mila manokatra ny navigateur fotsiny isika ary mankamin'ny toerana tena tianao. aza Tsy Internet browser intsony ny Internet Explorer ao amin'ny Windows 10 Ho an'ny Microsoft Edge, Apple dia manohy manafatra tsoratadidy amin'ny browser veteran.
Soa ihany avy amin'ny Microsoft Edge dia afaka manafatra haingana ireo tsoratadidy izahay, dingana iray izay tsy maintsy ataontsika tsindraindray hitazomana hatrany ireo maripezin'ny fitaovana Windows. Soa ihany fa ny fanaovana azy dia mila tsindry roa fotsiny, ka tsy ho fotoana maharitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » iCloud ho an'ny Windows, izay rehetra tokony ho fantatrao
Tsailun dia hoy izy:
Niezaka ny hampiasa izany amin'ny proxy an'ny orinasako aho ary tsy azo atao ny manamboatra ,,, misy hevitra ve?
Mamaly an'i Tsailun
Eny, nanandrana nandritra ny volana maro aho indraindray mba handrindra ny iCloud amin'ny Windows 10 ary tsy afaka atao izany. Mijanona ao amin'ny fikandrana "enter verification code" ianao. Na firy na firy ny nametrahako azy teo dia tsy tanteraka izany. Izaho irery ve no mitranga?
Rahoviana no mangataka aminao ny kaody fanamarinana? Raha manontany anao izy, dia satria manana singa fanamarinana roa ianao ary rehefa mampifandray fitaovana vaovao amin'ny kaontinao ianao, amin'ity tranga ity iCloud ho an'ny Windows, dia handefa hafatra amin'ireo fitaovana nampifandraisinao tamin'io ianao afaka miditra ao.
Marina, ary izany no ataoko. Ampidiro ny kaody izay mahatratra ahy amin'ny fitaovako iray hafa ary ny "famoahana" ao amin'ny Windows dia tsy manam-petra.
Tsy mitombina izany raha mifandray amin'ny Internet ny PC. Andramako izany avy eo. Na izany na tsy izany. Esory ny iCloud ary apetaho indray mba hahitana ny fomba fiasany.
Mbola manana an'io olana io ihany aho. Efa nanandrana safidy maro aho ary ny valiny dia nitovy foana. Ny nataoko izao dia ny famongorana ny iCloud, misintona azy indray, mametraka (iCloud 6.2.1.67), manomboka indray, manamboatra… ary mamaky tsy misy fetra.
Fahadisoana izay nataoko hatramin'ny nanovako ny Windows 10 ary nametra-pialana am-bolana maro aho. iPhone, iPad ary MacBook Pro tsy misy olana, fa ny Windows PC tsy vitako.
Lizeth dia hoy izy:
Manana sary 2.000 6.000 voatahiry aho, diso ny nanomezako azy fa misintona imbetsaka ary izao dia maka sary efa ho XNUMX izy ireo, tahaka ny fanafoanana ireo fampidinana) Efa nanidy ny fivoriana aho, nanova ny fanahafana fa rehefa nampavitrika azy aho dia mitohy hatrany ny fampidinana.
Valiny tamin'i Lizeth
Rehefa miditra ny fizarana safidy sary aho dia tsy misy afa-tsy ny sary ao amin'ny iCloud sy ny fizarana rakipeo, ka tsy azoko ireo safidy hafa rehetra.
Afaka mieritreritra zavatra ve ianao?
Salama maraina Adrian, ny fipihana eo amin'ny boaty "Photos in iCloud" dia ahafahan'ny safidy hafa. salama !!!
Salama maraina, miaraka amin'ny iCloud izao manaraka izao no mahazo ahy.
Ny hevitro dia ny hizara rakitra eo anelanelan'ny kaonty iCloud 2 (miaraka amin'ny fitaovana Apple sy Windows) hahafahana mitantana azy ireo amin'ny fitaovana rehetra.
Ny olana dia afaka mizara sy manitsy tanteraka ireo rakitra zaraina eo amin'ireo fitaovana Apple aho fa tsy izany no izy amin'ny iCloud ho an'ny Windows. Ireo lahatahiry sy rakitra izay vokarina avy amin'ny iray amin'ireo kaonty iCloud dia hita eo amin'ny fitaovako avy amin'ny kaonty iray ihany (Windows sy Mac) fa rehefa zaraina dia tsy hita ao amin'ny fitaovana Apple ihany izy ireo. Tsy afaka mahita ireo rakitra zarain'ny kaonty iCloud hafa amin'ny fitaovana Windows aho. Miarahaba ary manantena aho fa hamaha ny olana amin'ny fanavaozana ho avy. Mandritra izany fotoana izany, ho hitako raha manampy ahy handoa ny serivisy iCloud na hifindra any amin'ny serivisy rahona iray hafa izay afaka manome ahy serivisy feno.
Mameno ny Workflow i Apple
Ny fizarana iOS any Shina dia manome antsika tahiry ratsy indrindra tao anatin'ny telo taona lasa